Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny habaka amin'ny fampiharana Safari | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny habaka amin'ny fampiharana Safari
Carmen rodriguez | | Vaovao IPhone, Fampiharana iPhone, iOS 7
Ny fananana toerana ao amin'ny iPhone dia zava-dehibe hanohizana fitsapana, fampiasana ary hankafizanao ilay fitaovana. Raha mbola tsy nividy ny fahaiza-manao lehibe indrindra ianao na mbola voafetra, dia ho hitantsika anio ny fomba mamerina ny habaka Safari amin'ny alàlan'ny fanazavana ny safidy roa.
Na dia eo aza ny tsy fisian'ny habaka natokana ho an'ity fampiharana ity dia ho hitantsika ny fomba hamerenana ny habaka amin'ny tantara, cookies ary lisitra famakiana.
1 Ny lisitra famakiana. Sava lalana
1.1 Alefaso ny lisitry ny famakiana amin'ny iCloud ho an'ny iPhone
1.2 Tehirizo amin'ny iPhone ny pejy famakiana lisitra
1.3 Ahoana ny fomba hidirana amin'ny lisitry ny famakiana amin'ny iPhone
2 Fanadio Safari
2.1 Hamafana ny tantara sy hamafana ireo cookies sy data
2.2 Hamafana ny cache amin'ny lisitra famakiana
Ny lisitra famakiana. Sava lalana
Ny lisitra famakiana (List List) dia endrika Safari izay mamela anao mamela anao hanao tsoratadidy ireo pejy tianao hotehirizina raha vakiana manaraka, ny zavatra tsara indrindra dia ny fanananao azy nifandrindra teo anelanelan'ny iOS sy ny OS X anao, raha mbola mihetsika iCloud.
Alefaso ny lisitry ny famakiana amin'ny iCloud ho an'ny iPhone
Alohan'ny ahafahanao mandrindra ny lisitry ny famakinao dia tsy maintsy alao antoka fa alefa ny iCloud amin'ny tsirairay avy, ary mivadika izany Safari sync. Mba hanaovana izany, mandehana any amin'ny Settings> iCloud ary hamafiso fa manana ny fampandrenesana Safari ianao.
Tehirizo amin'ny iPhone ny pejy famakiana lisitra
Ao anatin'ny rindrambaiko Safari dia azonao atao ny miditra amin'ny safidy ahafahanao mitahiry ny pejy hitanao amin'ny fipihana ny kisary fizarana, izay hiseho ny safidy hitahiry ao amin'ny lisitry ny famakiana.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny lisitry ny famakiana amin'ny iPhone
Mandehana any Safari ary tsindrio ny kisary Favorites ao amin'ny bara fitetezana ambany (ny sary faharoa avy eo ankavanana) ary kitiho ny bokotra List List eo ambony.
Hamafana ny tantara sy hamafana ireo cookies sy data
Fidirana fidirana> Safari ary hanana ny safidy irery Mba hamafana ny tantara sy hamafana ireo cookies sy data, dia mihazakazaha manadio ny fitaovana arak'izay tratra na ny Tantara fotsiny raha toa ianao ka te hitazona ny sasany amin'ireo cookies.
Hamafana ny cache amin'ny lisitra famakiana
Fandraisana Fikirana> Ankapobeny> Fampiasana. Rehefa afaka segondra vitsy dia hanolotra anao a lisitra miaraka amin'ny rindranasa sy ny fanjifana fahatsiarovana izay ananan'ny tsirairay. Miditra amin'ny Safari isika dia afaka mahita ny antsipiriany.
Para esory ny cache amin'ny lisitra famakiana, kitiho ny Edit eo amin'ny zoro ambony ankavanana, ary kitiho ny mari-pamantarana minus izay miseho eo akaikin'ny fisongadinana. Raha tsy izany, swipe left ary ny bokotra mamafa Delete dia hiseho eo ankavanany.
Ny fanadiovana ny cache dia tsy midika hoe very ny angon-drakitra amin'ireo pejy voatahiry, tsotra fotsiny ireo izay tsy tehirizina ivelan'ny Internet dia tsy ho hita. Tao amin'ny menio fanovana Safari dia nahita safidy samihafa izahay, ny iray nanolotra anay ento ny lisitra famakiana amin'ny alàlan'ny angona. Ny fananana io safidy io tsy mandeha dia ilay ankehitriny manafaka toerana ary mamonjy antsika koa ny fihinanana data.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny habaka amin'ny fampiharana Safari
Luz dia hoy izy:
Tsy afaka mamafa ny habaka amin'ny mailaka aho HANAO NO HAHAZOANA AZY?
Valio ny MAZAVA
Ahoana ny fomba hanampiana fotoana amin'ny bara misy ny iOS 7.1.x